Ahiahy famonoan-tena :: Lehilahy hita faty nihantona teo amin'ny tsatokazo • AoRaha
Ahiahy famonoan-tena Lehilahy hita faty nihantona teo amin’ny tsatokazo
Feno olona nitangorona vao maraina tany amin’ny kianjaben’Ambodivoanio Nosy Be, omaly. Nahitana lehilahy iray nihantona teo amin’ny tsatokazon’ny kianja fanaovam-baolina. Niahiahy ny olona tamin’ny fahitana ny razana voalohany fa mety ho nisy namono, ka nahantona teo io lehilahy io. Nihevitra kosa ny olona sasany fa mety ho namono tena sy nananton-tena teo izy. Nidina teny an-toerana ny mpitandro filaminana. Nohenoina avy hatrany ny fitantaran’ny fianakaviana sy ny mpiara-monina amin’ity namoy ny ainy.
Olona nandalo tao amin’ny kianja no nahatazana voalohany an’ilay lehilahy nikiraviravy teo amin’ny tsatokazo. Niboridana ny vatany ambony. Nifatotra tady avy eny ambony ny tendany. Tsy nahitana ratra na endrika vono ny vatan’io lehilahy io, araka ny nambaran’ny zandary nanao ny fizahana ny razana teny an-toerana. Fantatra, avy eo, ny mombamomba azy rehetra.
Enina amby telopolo taona ity lehilahy izay mipetraka eo Ambodivoanio ity ihany. Fantatra araka ny angom-baovao nataon’ny mpitandro ny filaminana fa mbola niresaka sy nifanerasera tamin’ny olona teo an-tanàna izy, ny harivan’ny alakamisy.
«Nanana olana ara-tokantrano io lehilahy io, fony fahavelony. Nisy fifamaliana teo aminy sy ny vadiny, tamin’ny harivan’ny alakamisy. Hitan’ny vadiny nanapaka ny tady fanahazan-damba izy, tamin’io hariva io. Ahiana ho namono tena tamin’izany izy», hoy ny zandary any Nosy Be.
Voalaza fa tsy nahitana tranga hafahafa na olona heverina ho namono an’ity lehilahy hita faty ity ny sary voarakitry ny fakantsary miafina teo amin’ny manodidina an’Ambodivoanio.
Olan’ny famatsiana :: Nitokona noho ny fahatapahan-drano ny mponin’Antsahameva